याैन काण्डमा मुछिएका यी नेपाली सेलिब्रेटी - Purbeli News
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १४, २०७५ समय: २२:१०:२८
काठमाडौं । कलाकारहरू विभिन्न कारणले सधैँ गसिपमा आइरहने गर्दछन् । कहिले राम्रो त कहिले नरामो गसिपको सिकार सधैँ सेलिब्रेटी रहने गर्दछन् । विश्वभरका नै चर्चित महिला सेलिब्रेटी सेक्स काण्डमा मुछिने गर्दछन् । नेपालका पनि केही महिला सेलिब्रेटी सेक्स काण्डमा मुछिएका छन् । ती मध्ये केही अझै आफ्नो क्षेत्रमा सक्रिय छन् भने कहिले आत्महत्या गरेका छन् ।
१. श्रीषा कार्की : नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा अब्बल अभिनय क्षमता भएकी अभिनेत्रीको रूपमा मानिएकी श्रीषा कार्कीको नग्न तस्वरी पत्रिकामा छापिएको थियो । २४ वर्षीय यी अभिनेत्रीले पत्रिकामा आफ्नो नग्न तस्बिर छापिएपछी आत्महत्या गरेकी थिइन् । ‘जनआस्था’ नामक पत्रिकाले उनको नग्न तस्बिर छाप्दै उनलाई वेश्याको उपमा दिएको थियो । उनले सन् २००२ अक्टोबरमा आत्महत्या गरेकी थिइन् । सोल्टिनी, अल्लारे, आफ्नो बिरानो, मोहनी लाग्ला है जस्ता सफल चलचित्रमा उनले अभिनय गरेकी थिइन् ।
२. पूजा लामा : अभिनेत्री, गायिका तथा मोडल पूजा लामाको सेक्स भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । सेक्स भिडियो सार्वजनिक भए सँगै उनले डिजे शिशिर सँग विवाह गरिन् । डिजे शिशिर पूजाको यौन काण्डमा मुछिएका व्यक्ति थिए । तर, दुवैको विवाह लामो समयसम्म टिक्न भने सकेन । धेरै विवादमा तानिएपछी यति बेला पूजा विदेशमा रहदै आएकी छिन् ।
३. ज्योति खड्का : मोडल ज्योति खड्काको सेक्स प्रकरणले निकै ठुलो तहल्का मच्चाएको थियो । नग्न तस्बिर र भिडियो सार्वजनिक भएपछि ज्योतिले आत्महत्या गरिन् ।
४. नम्रता श्रेष्ठ : नेपाली ग्यालमर क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी तहल्का मच्चाउन सफल यौन काण्डको रूपमा नम्रताको यौन काण्डलाई लिइन्छ । नेपालकी अहिलेकी सबैभन्दा सफल अभिनेत्री नम्रताको डिजे तान्त्रिक सँगको सेक्स भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । सेक्स भिडियो सार्वजनिक पछि रेमन दास श्रेष्ठ सँगको प्रेम जीवनको समाप्ति भएको समेत धेरैले बताउने गरेका छन् । सेक्स काण्डपछी पनि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा उनी सफल अभिनेत्रीको रूपमा उनी परिचित छिन् । सामाजिक सञ्जालले स्वीकार नगरेका कारण भिडियो हटाइएको छ ।